Ime ụlọ sauna Cedar POD
Western cedar cedar bụ osisi sauna anyị kacha ewu ewu. Osisi sauna cedar siri ike, dị fechaa, anaghị adalata ma ọ bụ daa mbà ka oge na -aga, anyị nwere ike chepụta ma hazie ụdị na nha ọ bụla iji gboo mkpa gị.
Window anyị gbara okirikiri dị ịtụnanya n'ụdị Panoramic nke sauna anyị na -enye sauna nke ubi ọdịnala ọtụtụ uru.
Sauna mmiri ozuzo n'èzí
Enwere ike ịkwaga ya na ọnọdụ ọ bụla (ime ụlọ sauna infrared dị anya), na -echeghị oke ohere na ọnọdụ idobe ya.
Ime ụlọ Sauna n'èzí
Maka ahụmịhe sauna dị mma, ọ dị mkpa ka osisi nwee ike ịgbasa ma nwee nkwekọrịta na oke okpomọkụ.
Iji ntu na ihe ntanye ndị ọzọ emebiga ihe ókè nwere ike bute osisi nkewa. Mgbakọ bọọlụ na oghere nke sauna gbọmgbọm na-enye ohere ka osisi gbasaa wee banye nkwekọrịta n'ime eriri igwe, na-emepụta akara siri ike nke na-agaghị emebi.
Gbọmgbọm n'èzí (enweghị oghere)
Sauna na -etinye ahụ mmadụ na ikuku na -ekpo ọkụ na iru mmiri, nke na -eme ka mgbasa ọbara na metabolism dị ngwa ngwa, ma na -emeziwanye ọrụ anụ ahụ na akụkụ ahụ niile, gụnyere ụbụrụ, obi, imeju, splin, akwara na anụ ahụ.